Famonoana an’i Magalie sy i Bollon : tonga ao Sainte Marie ireo zandary renioney hanao famotorana (NewsMada) | AEMW
Famonoana an’i Magalie sy i Bollon : tonga ao Sainte Marie ireo zandary renioney hanao famotorana (NewsMada)
Nalefan’ny fitsarana ao Paris ireto zandary renioney roa lahy ireto hanao famotorana momba ilay raharaha famonoana an’i Magalie Chaigneau sy Romain Bollon…
Niditra an-tsehatra hanampy ireo mpitandro filaminana mpanao famotorona ao Sainte Marie ireto zandary renioney ireto amin’ny fikarohana ny marina rehetra momba ny famonoana an’i Magalie Chaigneau sy i Romain Bollon, mpiasa an-tsitrapo ao amin’ny Cetamada. Efa ao an-toerana, araka izany, ireto zandary renioney roa lahy “police technique et scientifique” ireto. Hitady sy hanangona ny porofo rehetra momba ity vonoan’olona ity no tena anton-dian’izy ireo. Fantatra fa olona efatra no mbola notazonin’ny mpitandro filaminana hanaovana famotorana ka teratany frantsay ny iray amin’izy ireo.
Misy lehibena banky anisan’ireo nosamborina
Tovovavy malagasy iray mianatra any Frantsa, saingy tonga nanao fialan-tsasatra ao Sainte Marie ity nosamborin’ny mpitandro filaminana ity, araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana. Voalaza fa niaraka tamin’ny fianakaviany izy ny alin’ny asabotsy 20 aogositra 2016 tao amin’ilay toeram-pandihizana (nandehan’ireo vazaha roa nisy namono) ary niara-nody tamin’izy ireo koa ny alahady maraina.
Fa voasambotra ihany koa ny lehiben’ny banky iray ao Sainte Marie izay voarohirohy ho tafiditra amin’ity raharaha vonoan’olona ity. Samy mbola voatazona ao amin’ny violon ao an-toerana avokoa ireto olona roa ireto, raha ny fampitam-baovao voaray hatrany.
Manoloana ity raharaha ity, namaky bantsilana tamin’ny alalan’ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety ny fianakavian’ireo voarohirohy ary nilaza fa endrika kolikoly nisamborana ny havan’izy ireo sy misy ambadika politika satria mitady hirika hamotsorana ilay teratany frantsay sakaizan’i Magalie teo aloha ireo, mpanao famotorana.
“Tsy jiolahy na mpamono olona ny havanay”, hoy hatrany ny fitarainan’ireo fianakaviana.
Ny angom-baovao hatrany no nahalalana fa mandrahona hanao fidinana an-dalambe ny olona sasany an-toerana ho fanoherana ny fomba fisamboran’olona tsy amin’antony ataon’ny mpitandro filaminana.
J.C sy Sajo
← Filohan’ny FJKM Andriamahazosoa Irako Ammi : “Ho vavolombelona eto amin’ny firenena ny fiangonana” (NewsMada)
Fantina (NewsMada) →